Kedu ka esi meziwanye usoro ntanetịpụta Amazon nke kachasị mma?
Na-eche na Amazon bụ nnukwu search engine na-emekarị na ngwaahịa na ire ere, ị kwesịrị ịmara otú e si melite gị Amazon ngwaahịa na peeji nke na mma njikarịcha maka gị isi lekwasịrị Keywords. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị otu esi emezi ntanetịime ngwaahịa Amazon site na isi ngalaba ya, dị ka Product Mbụ, Nkọwapụta Ihe, Nkọwapụta Ngwaahịa, yana Ngwaahịa Ngwaahịa. N'ikpeazụ, ịchọta onwe gị n'etiti nsonaazụ ọchụchọ kachasị elu n'ebe ahụ - time management system for employees. Ya mere, ka anyi hu otua isi meziwanye onodu Amazon maka okwu nke kachasi nma.
Olee otú iji meziwanye ngwaahịa Amazon
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị jiri mmalite nghọta nke isiokwu ndị ahụ na iji ha mee ihe n'ụzọ zuru oke n'okpuru usoro njikarịcha n'ofe ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ netwọk weebụ dị ukwuu ka a na-adọrọ na ndepụta ngwaahịa gị, mgbe ahụ, ị ​​ga - enwe ike ịmepụta profaịlụ Amazon gị na akụkụ ya ndị kachasị - n'ikpeazụ ị ga - ahụ ọkwa kachasị elu n'etiti ndị kachasị ere ahịa na -. N'aka nke ozo, uzo gi choro ugbua ga - eme nke oma - dika ahia ahia nke ahia gi. N'aka nke ọzọ, Otú ọ dị, ị nwere ike ịchịkwa ahịa ahụ na ụfọdụ nkọwa dị egwu nke kachasị mma maka isi isiokwu gị na isi ogologo oge ọchụchọ nke ndị ezigbo ahịa na-eji. Ọfọn, ọ bụ ụdị nchịkwa - ọ bụrụ na ịkwado elu, ị ga-achọta ngwa ngwa ma reekwuo ya. Ma ọ bụ nke ọzọ - mgbe ịchọtara ngwa ngwa, ị ga-ere ihe ndị ọzọ, ma bulie elu karịa ihe niile. N'okpuru ebe a, m ga-ekpochapụ ihe omimi ahụ ma gosipụta gị otu esi melite ntanetịime ngwaahịa Amazon site na ngalaba ya.
Ịmepụta Ndepụta Ngwaahịa
Nke ọ bụla mkpụrụ okwu achọtara na aha ngwaahịa gị na-achọ ya. Ọ pụtara na iji mkpụrụokwu ọ bụla ma ọ bụ ogologo-tail search ugboro ugboro - ma na aha ngwaahịa gị, na ebe ndị ọzọ na mpaghara ngwaahịa gị - na-atụ aro ka a zere ya ọ bụla ụgwọ. Mgbe ị na-ahapụta aha ahaahịa, cheta ịtinye isi okwu ndị dị na nhazi nke usoro nkwụsị ha. N'ụzọ dị otú ahụ, ọ gaghị emebiga ya ókè ma ọlị, ọ gwụla ma ịchọrọ itinye ya na isiokwu ndị ahụ ma mee onwe gị ihe ọjọọ karịa ezi.
Nke kachasị mma, hụ na ị ga-ezere ihe ndị na-esotekarị na ihe nkwụpụta gị na nchịkọta nchịkọta ngwaahịa:
) Akpukwala ihe ọ bụla ezighi ezi ma ọ bụ ọbụna na-eduhie eduhie ozi - dịka ọmụmaatụ, naanị ịnwe egwuregwu ọchụchọ kpọmkwem site na aha aha ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na-asọmpi.
Zere ịmepụta ogologo ndepụta nke mgbochi ma ọ bụ nkọwa ndị na-emepụta ihe dị oke nfe nke jupụtara n'ọtụtụ ozi na-adịghị mkpa / duplicated.
Egbula mgbe ị na-emegharị ndị ọbịa gị na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ (i. e. , anwala iji ọnụahịa ọ bụla nke atọ, onye nrụpụtara kpọmkwem, ma ọ bụ ihe ngosi mgbasa ozi n'ihu ebe ahụ).